Mpanamboatra sy mpamatsy masinina voahitsakitsaka any Sina - Puhua
an-trano > Products > Milina fanapoahana tifitra > Milina fanapoahana karazana fitifirana
Tracking Type Shot Blasting Machine crawler shot fanapoahana masinina fanadiovana dia mety amin'ny fanadiovana amin'ny faritra samihafa. Ny faran'ny fanariana metaly isan-karazany dia diovina amin'ny fasika, ny faritra misy ny ferrous dia very maina, ny tampon'ny tombo-kase dia mivonto sy mivonto, ny faritra misy ny sanganasa vita amin'ny sandoka sy ny hafanana dia voatsabo, ary ny ambonin'ny lohataona dia esorina ary diovina ny tampony. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny paozin'ity andiana fitaovana ity.
1.Fampidirana milina fanapoahana karazana voasedra
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' ny sanganasa vita amin'ny sandoka sy ny hafanana dia voatsabo, ary esorina ny tampon'ny lohataona ary diovina ny atiny. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny paozin'ity andiana fitaovana ity.
2.Famaritana ny milina fanapoahana karazana voasedra:
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana milina fanapoahana karazana shotot type tsy misy fenitra arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny antsipirian'ny workpiece, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Détail an'ny milina fanapoahana karazana voasedra:
4. Fanamarinana ny milina fanapoahana karazana voasedra:
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny milina fanapoahana karazana shotot Type-shoted tsara kalitao :, serivisy ho an'ny mpanjifa sy vidiny mifaninana, nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mihoatra ny kontinanta dimy izahay.
2. Ahoana ny fametrahana ny Machine Tracking Type Shot Blasting :?
4. Ahoana no hifehezana ny kalitaon'ny Machine Tracking Type Shot Blasting :?
5. Inona no ampahany miasa afaka manadio amin'ny Tracked Type Shot Blasting Machine :?
Raha liana amin'ny Machine Tracking Type Shot Blasting ianao :, tongasoa ianao hifandray aminay.
Hot Tags: Milina fanapoahana karazana fitifirana, mividy, namboarina, be indrindra, Sina, mora vidy, fihenam-bidy, vidiny ambany, mividiana fihenam-bidy, lamaody, farany, kalitao, maharitra, maharitra, mora raisina, fivarotana farany, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, ao an-tsokosoko, Sample maimaim-poana, marika, vitaina any Chine, vidiny, lisitry ny vidiny, teny nalaina, CE, Warranty herintaona